Ciidamada NISA oo sheegay inay gacanta ku dhigeen Sarkaal ka tirsan Amniyaadka Shabaab – Wakaaladda Wararka Hiilnews
By Ciise Cabdi Ciise on January 19, 2019 No Comment
Sabti, Janaayo, 19, 2019, (HNN)Ciidamada NISA ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen Sarkaal ka tirsan Amniyaadka Al-Shabaab, kaddib howlgal maaliniamdii shalay ka fuliyeen magaalada Muqdisho.
Sida lagu qoray barta Twitter-ka NISA ayaa lagu sheegay in howlgal si taxadar leh loo fuliya kaddib lagu soo qabtay xubin hoggaamiye u ahaa Koox Amniyaad ah oo ka howlgala Muqdisho.
“Howlgal qorshaysan oo si taxader leh loo fuliyay ayaa Ciidamada Amaanku 18-ka bishaan, kusoo qabteen xubin hogaamiye u ahaa koox amniyaad ah oo ka howlgala magaalada Muqdisho”ayaa lagu yiri qoraal kooban oo barta Twitter-ka lagu soo qoray.
Ma jirto faah faahin intaas dhaafsiisan oo NISA soo bandhigtay, taasoo la xiriira magaca Sarkaalka, inkastoo marar badan ay NISA barteeda ku shaacisay howlgalo lagu soo qabtay Saraakiil ka tirsan Daacish iyo Al-Shabaab, kuwaasoo xogtooda ay xadiidneyn.
NISA ayaa iminka ku soo aruurtay qoraalada kooban ee barteeda Twitter-ka ku shaacisay howlgalada ay sheegto inay ku soo qabato xubnaha ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish oo aanan la sii socon faah faahin intaas dhaafsiisan, mana jirto maxkamad illaa iyo hadda la soo taagay ragga la sheego in la soo qabtay.
Ciidamada NISA oo sheegay inay gacanta ku dhigeen Sarkaal ka tirsan Amniyaadka Shabaab added by Ciise Cabdi Ciise on January 19, 2019